110 doolar oo deyn ah oo 20 sano ay socoto bixinteeda (shaqooyinka adoonsiga)+ Sawiro – SBC
110 doolar oo deyn ah oo 20 sano ay socoto bixinteeda (shaqooyinka adoonsiga)+ Sawiro
Wadamo badan oo dunida ka mid ah haba ugu badnaadeene wadamada Aasiya waxaa ka jirta shaqooyinka xoogsiga ee lacag amaah lagu badasho inaad u shaqeyso si arxan daran taasi oo waliba socon karto mudo sanooyin ah si aad isaga gudo dayntaasi.
Haresh wuxuu ku nool yahay magaalo ka tirsan Galbeedka gobolka Bengal ee wadanka Hindiya, wuxuu mudo 20 sano ka hor ah dayn ahaan uga qaatey nin ganacsade ah oo dhulka ka ganacsada, lacagtaasi ilaa iyo maanta Haresh dib u ayuu u bixiyaa waliba ilmihii u dhashay intii uu lacagtaasi amaahada loogu lahaa ayaa ilaa iyo hada geestooda shaqo ka galey si ay u bixiyaan lacagta Aabahood lagu leeyahay.
Sidee lacagtaasi ku qaatey Herash
Herash 20 sano ka hor waxaa niyadiisa soo gashay damac guur waxaana ku biday neecowda laxowga jaceylka, nolasha faqiirnimaduna kama baajin in uu isku dayo in uu aduun u soo jeesto oo guur xagiisa u jaleecsado.
Sarika oo aheyd gabar ay isku doon wada raacaan yacni nolasha faqiirnimada ay wehel wada yihiin ayuu calmaday, isagoo isku hawley sidii uu u guursan lahaa gabadhaasi laabtiisa degtey.
Talo waxay noqotey in uu tago nin dhulka ka ganacsada wuxuuna u sheegay in uu ka doonayo lacag deyn ah oo uu ku guursado isla markaana uu u shaqeyn doono oo uu xoogiisa wixii uu ka helo shaqadaasi xoogsiga ahna uu lacagta daynta ah ku bixiyo.
Waqti badan ma qaadan intii ganacsadihii uu Haresh dayn ahaan u siiyey $ 110 doolar lacagtaasi oo uu ku aroosay Sarika oo aheyd gabadhii laabtiisa xushey ee uu jaceylka daran u qaadey, ileyn Jaceylku indho iyo dhego ma leh oo ma garanayo waa faqiir & waa tujaar.
Laakiin Haresh lacagtaasi ilaa maanta oo laga joogo 20 sano xiligii uu amaahdaasi qaatey oo waliba uu ninkii u shaqeynayo wali lacagtaasi 110-ka doolar ah qayb ayaa ku sii dhiman.
Xaaskiisa, wiilashiisa & gabdhaha ay qabaan waxay isku bahaystaan bixinta deynta
“Dhamaan qoyskeygva oo dhan wali deyn ayey ku jiraan, xaaskeyga Sakira, wiilasheyda, iyo waliba xaasaskooda waxay ilaa iyo hada u shaqeeyaan ninkii ganacsadaha ahaa ee daynta igu lahaa iyagoo lacagtii u gudaya, maalin maalin ka mid ah xitaa waxaa lacagtaasi inay u gudaan ninkaasi u shaqeyn doona ilmaha aan dhaley ilmaha ay sii dhalaan, mana jirto ilaa iyo hada sabab aan lacagtaasi bixinteeda uga xaroobi karno ilaa aan dhimano” sidaasi waxaa u sheegay wariye ka tirsan Telefishinka CNN-ka oo sheekadan baahiyey Haresh.
Haresh ma leh wax dareen ah oo aan ka aheyn in uu lacagtaasi deynta ah dib u bixiyo, isaga & qoyskiisuba waxay shaqeeyaan saacado badan oo gaaraya 14 saacadood iyo wax ka badan iyagoo u shaqeynaya ninka daynta ku leh.
Sanad kasta 100% dulsaarta lacagta deynta ah
Mushkilada kale ee Haresh haysata waxay tahay isagoo sanad kasta marka uu dhamaado inta lacagta ee ku dhiman 100% la saaro dulsaar ama Ribo deyntaasi ku saleysan.
Dunida xiligan waxaa la xaqiijiyey inay ka jiraan 18.5 ilaa 22.5 mulyan oo shaqooyinka adoonsiga ah, 90% shaqooyinkaasi adoonsiga waxay ka jiraan qaarada Aasiya.